खुशी आफै भित्र छ ,खोज्ने कोशिस गरौ
२०७७ असोज १५ बिहीबार
कहिलेकाही यस्तो लाग्दछ कि सारा कुरालाई छाडेर कहिँ कतै एकान्तमा ,कसैले निचिन्ने ठाउमा गएर बसौ । जब जब जिबनमा भनेजस्तो हुदैन ,तपाई हामीले सोचेजस्तो आफन्तहरुले ब्यबार गर्दैनन् तब यो भावाना तपाई हाम्रो मनमा खहरे खोला सरि मडारियर आउने गर्दछ । जिबनमा अनेकौ खालको दुख गर्छौ,आफ्नो मान्छेहरुको खुशीको लागि आफ्नो खुशीको बलिदान दिन्छौ तर त्यसको बदलामा नत हामि खुसि र सुखी हुन सक्छौ नत आफ्नो मान्छेहरुले नै हाम्रो भित्रि भावना बुझ्ने कोशिस गर्ने गर्छन ।
हाम्रो मनमा अनेकौ प्रस्नहरु आउने गर्छन किन यस्तो भैरहेको छ ? कतै म मा नै कुनै कमि कमजोरी त छैन ? म जसको खुशी चाहिरहेको छु किन उसले नै मेरो भावाना बुझ्दैनन् ? यी यस्ता प्रस्नहरुले नत तपाई हामीलाई दिनमा भोक लाग्दछ नत रातमा निद्रानै लाग्दछ । तपाइ हाम्रो नजिकका मानिसहरुबाट जब हामि अपमानित हुनेगर्छौ तब यस्तो लाग्दछ कि यो दुनिया ब्यर्थ छ ।
फेरी हामी समालिएर सोच्ने गर्छु कि ति व्यक्तिहरु एकदिन म प्रति सकारात्मक हुनेछन र मेरो भावना राम्रो संग बुझ्ने छन् । हो यहि सोचले हामी जिबनको यात्रामा अगाडी बढिरहेका हुन्छौ र यसरीनै हाम्रो बर्षौ बित्नेछ । तपाई हाम्रो जिबनमा प्रेम सम्बन्धमा ,पारिवारिक सम्बन्धमा ,सामाजिक सम्बन्धमा समस्या होलान अनि अझ धेरै आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरह्नु हुन सक्छौ । साबधान यी यस्ता समस्या संग भागेर हैन लडेर अगाडी बढ्नु बुद्दिमानी हुन्छ ।
एउटा गित छ नि
“मर्ने कसैलाई रहर हुदैन
तर नमरेको कुनै प्रहर हुदैन
भागेर जाऊ कुन ठाउ जाऊ
मान्छे नमर्ने सहर हुदैन”
मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त जिबनको कुन मोडमा समस्या छैन ,पिडा छैन ,दुख छैन अनि व्यथा छैन ? कुन व्यक्तिको जिबनमा सधै उपलब्धि मात्र होला ? याद गर्नुहोस ,समय तपाई हाम्रो हो,समयलाई सुन बनाउने कि सुतेर समय बर्बाद गर्ने त्यो तपाई हाम्रो हातमा हुन्छ ।
जिबनमा आउने कठिन भन्दा कठिन परिस्थिति र समस्या संग लडेर अगाडी बढ्नु नै बुद्दिमानी हुन्छ । समस्याले पनि भनोस कि ओहो यो मानिससंग टक्कर लिनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह रहेछ । जिबनमा यस्तो कर्म गर्नुहोस ताकी तपाई समस्या देखि हैन समस्या तपाई बाट टाढा भागोस । जसरि एउटा घर बनाउदा बलियो इट्टा ,सिमेन्ट ,बालुवा ,रड आदि सामग्री प्रयोग गरिन्छ अथवा घर बलियो बनाउनको लागि सामानमा कुनै सम्झौता गरिदैन त्यसरीनै जिबनमा पनि हामीले आफ्नो कर्ममा कुनै सम्झौता गर्नुहुदैन । जिबनमा आउने हरेक दुख ,पिडा ।
कस्ट आदिसंग हामीले लड्न सक्यौ भने हामी पनि एक बलियो घर जस्तै बन्नेमा कुनै संका छैन । जिबनमा यो नसोचौ कि समयले मलाई ठग्यो ,यो सोचौ कि मैले समयलाई चिन्न सकिन । अरुलाई खुशी र सुखी देख्दा यो नसोचौ कि कति आराम छ तिनीहरुको जिन्दगि ,यो सोचौ कि तिनीहरु खुशी र सुखी हुनुको पछाडी कति धेरै सम्झौता र दुख होलान । पहिला हामीले आफूप्रति बिस्वास राखौ ,अनिमात्र अरुले हामीले बिस्वास गर्नेछन ।
हर कोही मानिसमा कमीकमजोरी हुन्छन ,ति कमीकमजोरीलाई सुधारेर अगाडी बढ्ने कोसिस जिबनमा जारी राखौ । आफ्नो कमि कमजोरीलाई मनमा लिएर जिबनदेखी हार खादै ,जिबनबाट भाग्न थाल्यौ भने कहिले सम्म भाग्न सकौला र हामी ? दिल खोलेर बाचौ,जिबनमा आउने हर समस्यालाई सहयात्री बनाएर अगाडी बढौ । खुशी आफै भित्र छ ,खोज्ने कोशिस गरौ ।